သင်္ကေတကျမ်းစာ « lunnsetnoemyat
Jan21 by lunnsetnoemyat
၁။ ဇူလိုင် ၈၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ထွက်ခွာရာပြပုဒ်
သမိုင်းမှာတော့ ၁၉၅၀ ဇူလိုင် ၈ ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မက်အာသာကို ကုလသမဂ္ဂတပ်များရဲ့ သေနာပတိအဖြစ် ကိုရီးယားမှာ ကြီးကြပ်စေပြီး ၁၇၈၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုတဲ့နေ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက် တော့ အေးစက်ခြောက်ကပ်နေတဲ့ နေ့စွဲပါပဲ။ ၀ါကျင့်နေတဲ့ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က ဒီအမှတ် အသားတွေကို မေ့လျော့ပစ်လိုက်ဖို့တော့ ငါမကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ နတ်ဆိုးပိုင်တဲ့ နေ့စွဲတွေအတွက် ငါ့မေတ္တာတရားတွေကိုပဲ လောင်းကြေးထပ်လိုက်ပါရဲ့။ ညည ငါ့ အိပ်မက်ထဲမှာ လေယာဉ်တစ်စင်းဟာ အဝေးကို ပျံဝဲထွက်ခွာသွားနေပေါ့။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ တိမ်တိုက်တွေရဲ့အဆုံး…. ဟိုး အဝေးဆုံးကြီးထိပေါ့ကွယ်။ အိပ်ယာက နိုးလာတော့ ငါ့ဝင် သက်ထွက်သက်တွေ ရစ်သမ်မမှန်ဘူး။ ရေဆာလိုက်တာ။ စိတ်ချပါ… ကျန်ရစ်သူရဲ့ သစ္စာတရားဟာ လေးနက်စွဲမြဲနေမှာပါ။ ညရဲ့အဝေးက နာရီသံချောင်းခေါက်သံတွေ အောက်မှာ ငါ့ရင်ဘတ်ကို စိုက်ဝင် သွားတာ အသွားထက်မြလွန်းတဲ့ ဓားတစ်လက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
၂။ သံမဏိရောင်အလွမ်းနဲ့ လမ်းတွေဟာ မဆုံးဘူး
အဆုံးမဲ့တဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ငါတစ်ယောက်တည်းလျှောက်နေခဲ့ရင်း ငါ့အသွေးအသားတွေအနှံ့ ငါ့နံရိုးအကြိုအကြားတွေထဲအထိ ငါ့ရိုးတွင်း ခြင်ဆီတွေအဆုံး အလွမ်းဟာ လက်သည်း ချွန်ချွန်တွေနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ငါ့ကို ထိုးခွဲခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အတူဝယ်စားဖူးတဲ့ လမ်းဘေးမှာ အကြော်ရောင်း နေတဲ့ ကုလားကြီးဆီက အကြော်တွေ နှစ်ယောက်စာဝယ်ပြီး ငါတစ်ယောက်တည်း စားပစ်ခဲ့ပေါ့။ ပန်းခြံထဲက နှစ်ယောက်ထိုင် သစ်သားခုံလေးပေါ် ငါတစ်ယောက် တည်း သွားထိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လွန်းစွာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ငါရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး မိုးကလည်း စွတ်စွတ်အီအီ ရွာသွန်းလို့….။ ကောင်းကင်ဟာ ပြာမှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ငါ့အလွမ်း တွေကို မဟားဒယားဖြစ်အောင် တွန်းပို့ပေးနေသလို အရောင်မျိုးပေါ့။ ငါဟာ ကုတ်အင်္ကျီအိတ်ပေါက်တွေထဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ထည့်ပြီး မင်းကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ သတိရနေခဲ့တယ်။ မှန်နံရံတွေ ကာရံထားတဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်တွေကို မြင်တော့ မင်းကို လွမ်းလိုက်တာ…။ မင်းက ဖိနပ်ဆိုင်မှန်သမျှကို အလှူပေးတဲ့အိမ်လို သဘောထားပြီး တစွက်စွက်ဝင်ကြည့်တတ်တယ်မဟုတ်လား။ မြို့လယ်ဖိနပ် ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်က မင်းအတွက် ငါတို့စပ်တူဝယ်ခဲ့ကြတဲ့ ဝေါကင်းရှူးလေးလည်း ခုလောက်ဆို ဟောင်းနွမ်းသွားလောက်ပြီပေါ့။ ရုတ်တရက် တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ အေးမြ တဲ့ လေရိုင်းတစ်ချက်ကြောင့် ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တွန့်ခါသွားတယ်။ ဒီအချိန်ဆို လေအေးပေးစက်တွေကြားမှာ ရောက်နေမယ့် မင်းကိုလည်း ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်မိပါရဲ့။ ““အဖဘုရားသခင် သူမအား ကျန်းမာခြင်းကို အစဉ်အမြဲ ပေးသနားတော်မူပါ။””
အဲဒီနေ့က အလွမ်းကြောင့် ငါ့လည်ချောင်းတွေဟာ ခြောက်ကပ်နခဲ့တယ်။ များပြားလှတဲ့ လူလှိုင်းအုပ်ကြီးကြားက လက်ချင်းတွဲချိတ်ထားတဲ့ စုံတွဲတွေကို မြင်တော့ ငါ့ဘယ်ဖက်ရင်ဘတ် ဟာ နာကျင်သွားမိတယ် ထင်တယ်။ ငါတို့ မကြာခဏ စီးနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြဖူးတဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးပေါ်မှာ ခုတော့ ငါ မင်းကို တမ်းတနေခဲ့တယ်။ ထိုင်နေတဲ့ ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိနေရမယ့်အစား ပိန်ကပ်ကပ်သွားခေါခေါ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ငါ့ဘက်အတင်း တိုးကပ်လို့…။ သြော်.. သူ့ဘက်ပြတင်းပေါက်က မိုးပက်နေတယ်မဟုတ်လား။ ရာသီဥတုက လည်း အေးလိုက်တာ။ မင်းအတွက်ဆိုပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ ဆေးပြားတွေက လောလောဆယ် ငါ့အတွက် ဖြစ်လာပြီပေါ့။ သတိရမှုတွေနဲ့ ငါ့ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးဟာ တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲစပြုလာခဲ့တယ်။ အတူတကွ စားသောက်ဖူးတဲ့ ဆိုင်တွေကို ရှောင်ကွင်းပြီး အဆုံးမဲ့တဲ့လမ်းတွေပေါ် ငါလျှောက်လာခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ ဆိုင်တွေထဲ ၀င်မိခဲ့ရင် ငါဟာ မင်းကို ဒီထက်ပိုပြီး သတိရမိသွားဖို့ပဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ အဲဒီ့အတွက် လောလောဆယ် ငါ့မှာ လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးလည်း ရှိမနေခဲ့ဘူး။ ငါ့ရဲ့ ကုတ်အင်္ကျီအိတ်တွေ ထဲမှာ ရေးလက်စ စာမူအကြမ်းတွေပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံပါလေ။ ဒီစာမူအကြမ်းတွေကို တစ်ချိန်မှာ လူတွေက ရွှေတုံးတွေနဲ့ လာရောက်လှဲလှယ်လာကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ့နေ့က မြို့လေးရဲ့ အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်ပေါ်တက်ပြီး မင်းရှိမယ့် အရပ်ဆီ လွမ်းစိတ်နဲ့ ငါ ငေးမျှော်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကောင်းကင်ဟာ ပြာမှိုင်းမှိုင်းအနေအထားကနေ အညိုဖက်ကို ကူးပြောင်းလာနေပြီ။ ဆိုးရွားပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ဟော့ဒီ သံမဏိရောင်အလွမ်းတွေ သက္ကရာဇ်ဘယ်နှစ်ခုအထိ နှိပ်စက်နေဦးမှာလဲကွယ်။ ငါ့ မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်စက် တစ်ချို့ ပေါက်ခနဲ ကျဆင်းလာခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က မသိမမြင် မကြားနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုက မင်းဆီ ဘယ်လို နည်းမျိုးနဲ့မှ ငါမဆက်သွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တိတ်တိတ်လေးပဲ ငါလွမ်းဆွတ်နေခဲ့တယ်။
မကြာခဏရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တည်းခိုခန်းလေးမှာ ဒီတစ်ခါ တတိယထပ်က အခန်းတစ်ခန်းရတယ်။ မင်းအနမ်းတွေနဲ့ စေးပျစ်လောင်ကျွမ်းရာ နေရာလေးပေါ့ကွာ။ ငါတို့ဟာ တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ယောက် တပ်မက်မှုအပြည့်နဲ့ ပြင်းပြင်းပြပြ ဖက်ရစ်တွယ်ထားခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လောက် အင်အားကြီးတဲ့ လက်ချောင်းတွေပဲဖြစ်နေနေ ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေ ကို ဝေးကွာအာင် မဆွဲခွာနိုင်ပါဘူးကွယ်။ မင်း မျက်စိတွေမှိတ်ထားချိန်မှာ ငါက တိုးဝင်ပြီး ငါ့မျက်စိတွေ မှိတ်ပစ်လိုက်ချိန်မှာ မင်းက တိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ ငါရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပျော့ပြောင်း ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ မင်းကို ကျေနပ်မှုအပြည့် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခိုက်အတန့်တစ်ခုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ မင်းပုံရိပ်ကို ငါဘယ်တာ့မှ မေ့နိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ “သွားမယ် နေချင်နေခဲ့”အဲဒီ့စကားဟာ ငါ့နားထဲ ခုထိပေါက်ကွဲနေဆဲ…။ အခန်းနံပါတ်မမှတ်မိတဲ့ တည်းခိုခန်း တစ်ခုမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တိတိကျကျ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လေရဲ့။
၄။ အမှတ်တရတွေကို ဘာဖြစ်လို့ မေ့ပျောက်မရနိုင်ခဲ့ရတာလဲ။
မြို့လေးမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆိုင်းဘုတ်တွေ မြင်ရတဲ့အခါတိုင်း အဆုံးမဲ့တဲ့ လမ်းတွေပေါ်လျှောက်နေတဲ့ ငါ့ခြေထောက်တွေဟာ ရပ်တန့်သွားမိတယ်။ တစ်ဆက် တည်းမှာပဲ မင်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ထားတဲ့ ဒီဘာသာရပ်အတွက် ငါ့ ဂုဏ်ယူမိပါရဲ့။ ဟိုတုန်းက စနေ တနင်္ဂနွေတွေဟာ ငါ့အတွက် သေရာပါ ဂီတပဲ။ ကားမှတ်တိုင်တွေ က ငါတို့ရဲ့ ချိန်းဆိုမှုတွေ တစ်ချိန်မှာ ပြန်ရနိုင်ဦးမလားလို့ သိချင်တယ်။ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို သတိရမိတော့ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အလိုလိုနေရင်း မိုးရေတွေ ရွှဲနစ်လာသလို ခံစားလာမိရဲ့။ မိုးရွာထဲ ကားတစ်စီးကို လမ်းပေါ်ထွက်ငှားနေတဲ့ ငါ။ ပလက်ဖောင်းမှာ ထီးတစ်ချောင်းအောက် ရပ်နေတဲ့ မင်း။ တစ်စစနဲ့ မိုးသားတွေသာ ပိုမိုထူပြောလာတယ်။ ငါတို့က ကားတားလို့ မရခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မင်းရဲ့အဝေးခရီးမှာ ယူဆောင်သွားမယ့် ခရီးဆောင်အိတ်ကို သည်းထန်နေတဲ့ မိုးရေထဲ ငါ့ပုခုံးနဲ့ ထမ်းသယ်လာခဲ့ပါတယ်။ အလွန်အမင်း လေးလံစွာနဲ့။
ငါနဲ့မင်းကြားမှာ တယ်လီဖုန်းခေါ်သံတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးလွန်မြို့ပြ တိုက်တာတွေလို တဖြည်းဖြည်းထူထပ်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်။ ငါ့အပေါ် ထားရှိတဲ့ မင်းရဲ့ မေတ္တာတရားတွေဟာ တယ်လီ ဖုန်းကြိုးလေးတွေထဲကနေတစ်ဆင့် ငါ့ဆီတသွင်သွင်စီးဆင်းခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ မင်းအတွက် ငါ့ရဲ့ အားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေဟာလည်း တယ်လီဖုန်းခွက်တွေ ထဲမှာ တောက်ပခဲ့ပါရဲ့။ မင်းရဲ့ ဖြတ်တောက်ရက်စက်မှုကိုလည်း တယ်လီဖုန်းထဲကနေပြီး ငါလက်ခံခဲ့ဖူး သေးတယ်လေ။ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေမှာ ငါဟာ မင်းဆီက တယ်လီဖုန်းသံ ကို မျှော်လင့်လို့ပေါ့။ တယ်လီဖုန်းဟာ ငါတို့နှစ်ယောက် အကြားမှာ အရေးပါတဲ့ ကူးလူးမှု။ ဟိုတုန်းက ငါဟာ ပိုနီတေးဆံပင်ပုံစံနဲ့… မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရတဲ့ ကဗျာတစ် ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်နဲ့… ဂျစ်ကန်ကန်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့… ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့… ပြီးတော့ ငါသိပ်ချစ်တဲ့ မင်းနဲ့ပေါ့ကွယ်။ အရာရာကို တစ်ကပြန်စဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူသားတစ်ဦးဟာ ငါပါကွာ။ မင်းအတွက် ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ငါ့ဥပဒေသတွေဟာ ခိုင်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ စိုစွတ် တောက်ပတဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့အတူ လိမ္မာခဲ့ပါရဲ့။ တဖြည်းဖြည်းအသားကျလာတဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ထပ်တူညီမှုတွေဟာ တသမတ်တည်း ဖြစ်တည်မနေ နိုင်မှန်း အသိနောက် ကျခဲ့တာက လွဲရင်ပေါ့။ မင်းပြောတဲ့ မလိုက် ဖက်ခြင်း အမိန့်စကားတစ်ခွန်း အောက်မှာ မကြာမတင်ဘဲ ရိတ်သင်ပစ်ခဲ့ရတာ လပေါင်းများစွာ မွေးမြူ ထိန်ချန်ထားခဲ့တဲ့ ငါ့ဆံပင်ရှည်တွေလေ။ တကယ်က ဆံပင်ရှည်တွေနဲ့အတူ ငါ့ဆိုးသွမ်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပါ ရိတ်သင်ပစ်ခဲ့တာ ပါကွယ်။
တစ်ခါက ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းရဲ့ မှတ်ပုံတင်လေးကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် မင်းဆီကို ဂငယ်ကွေ့ပြန်လာတဲ့ ငါ့ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မင်းလက်ခံမှာ မဟုတ်တာ သိပ်သေချာတယ်။ မနက်ပိုင်းတချို့မှာ ရေနံဆီဝနေတဲ့ သစ်သား တန်းလျားကြီးလို နှစ်ထပ်အဆောက်အဦထဲက မှတ်ပုံတင် စာရေးမဆီ ငါတို့ အတူတူသွားရောက်ခဲ့တာတွေကို ငါပြန်မှတ်မိပါသေးရဲ့။ အပြန်မှာ ငါတို့ဟာ အဲဒီ့ အဆောက်အဦကြီးနားက စားသောက်ဆိုင်လေးထဲ ၀င်ထိုင်တတ်ကြသေးတယ်။ ရက်အတော်ကြာတဲ့ထိ မင်းရဲ့ မှတ်ပုံတင်လေးအတွက် ငါတို့ အလုပ်ရှုပ် ခဲ့ကြဖူးပါရဲ့။ အမှတ်တရ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံက လေးတွေက ငါ့စားပွဲပေါ်မှာ အမြဲလိုလို ရှိနေခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ဒီဓာတ်ပုံလေး တွေကို ကိုင်ကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်းမှုကြောင့် ငါ့ရင်ဘတ်ဟာ ဆို့တက်လာ တတ်တယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ မင်းရုပ်က သိပ် မျက်နှာပြောင်တာပဲနော်။
၅။ အကြည့်တွေ ဂစ်တာကြိုးလို တုန်ခါနေခဲ့ကြတယ်။
ဘယ်လို ဗေဒင်ယတြာကိုမှ မယုံကြည်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကို မင်းနဲ့ငါ သဘောတူညီခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ငါတီးခတ်တဲ့ တေးသီချင်းတွေကို မင်းက တိုးတိုးကလေး လိုက်ဆိုလို့ပေါ့။ မြို့လေးအနှံ့လျှောက်သွားရင်း မိုးစက်တွေ အောက်ရောက်တဲ့အခါ ငါတို့နှစ်ဦးဟာ အနီရောင်တီရှပ်ကို ဆင်တူဝတ်ပြီး ထီး တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ လုံလောက်ခဲ့ကြတယ်။ ပန်းခြံတကာမှာ ငါတို့ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေထက် ပျော်ဖို့ကောင်းတာ ဘာများရှိနိုင်ဦးမှာလဲကွယ်။ အဲဒီတုန်းက ကောင်းကင်ဟာ ဒီနေ့လိုမျိုး မည်းမည်းမှောင်မနေခဲ့ဘူး။ ကမ္ဘာမြေဟာ ဒီနေ့လိုမျိုး ပျင်းရိစရာမကောင်းသေးဘူး။ နောက်ပြီး လမ်းမတွေဟာ လည်း ဒီနေ့လိုမျိုး အဆုံးမမဲ့သေးဘူးကွယ့်။
ငါတို့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့နေ့က တွဲထားတဲ့လက်ကို ဖြုတ်ချပေးလိုက် ရတယ်။ ဆိုလက်စသီချင်းကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ နှလုံးသားက ခုန်ရင်း တန်းလန်း ခဏငြိမ်သက်သွားတယ်။ အတိအကျ မမှတ်မိပေမယ့် အဲဒီတုန်းက တိမ်တွေဟာ အုံ့အုံ့မည်းမည်း ရှိနေမှာပဲ။ သစ်ပင်တွေတိုင်းက သစ်ရွက်တွေဟာ အကုန်အစင်ကြွေကျကြမှာပဲ။ ရှိရှိသမျှ တေးရေး ဆရာအကုန်လုံး အလွမ်း သီချင်းတွေကိုပဲ အင်တိုက် အားတိုက် စတင်ရေးဖွဲ့နေကြ မှာပဲ။ ခွဲခွာခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအကြည့်မှာ ငါတို့အရိပ်တွေက ဂစ်တာကြိုးလို တုန်ခါလို့…။
ဒီစာစုတွေကို သင်္ကေတကျမ်းစာလို့ အမည်နာမတပ်ပြီး လပြည့်ည တစ်ညမှာ ငါအဆုံးသတ်ရေးသားနိုင်လိုက်ပါတယ်… ဘေဘီ။
ရတီ၊ ဧပြီ၊ ၂၀၀၈
This entry was posted in လွန်းဆက်နိုးမြတ် ၀တ္ထုတိုများ.
← ဂျက်ကီနှင့် နက်ကျော်ကိုက်ခဏ်း အရေးအသား
အထူးကြိုတင်မှာကြားထားသော ရူးသွပ်မှု →
2 comments on “သင်္ကေတကျမ်းစာ”